Daboollada Fiberglass waxaa si balaadhan loogu isticmaalaa daaweynta biyaha iyo bullaacadda, kiimikada iyo batroolka, cuntada, farmashiyaha, iwm.
Daboollada Fiberglass waxay ku kala duwan yihiin midabbo iyo qaabab sida wareega, afar gees ah, arkad, guryo, nooca guriga, iwm sida macaamiisha loo baahan yahay.
Daboollada Fiberglass waxaa had iyo jeer loogu talagalay inay la kulmaan heerkul baaxad balaadhan, dusha sare ee dusha sare ayaa si cajiib ah u adkaysata xaaladaha adag ee deegaanka, taas oo ka samaysa fiberglass wax walboo fiican u leh soo-gaadhista waxyaabaha ay ka midka yihiin qorraxda, barafka iyo xitaa jawiga cusbada leh ee laga helo dhow. dhanka xeebaha. Xaddiyadaha dabaysha iyo seismiga ayaa sidoo kale loo tixgelin doonaa xisaabinta qaab-dhismeedka. Falanqaynta Elementary (FEA Element Falanqaynta Elementary) (FEA) ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in kor loogu qaado naqshadda xitaa sii sii dheer.
Daboollada fiberglass iyo koofiyadaha waxaa soo saaray:
1．Xaraashka wanaagsan: sababtuna tahay hawo yaraanta kuleylka yar awgeed, daboolka fiber-ka ayaa buuxin kara shuruudaha xayndaabyada guud iyada oo aan la dhisin xayndaab dheeri ah.
2．Miisaan yar iyo xoog sare. Miisaanka sheyga dhaldhalaalka waa 1/3 ~ 1/4 oo bir ah.
3．Rakibaad fudud iyo kharash yar oo dayactir ah
4．Daboolida waxaa loo naqshadeeyaa lagana soo saari karaa qaybo yaryar oo si fudud loogu maareeyo iyo gaadiid
5．Caabbi wanaagsan oo iska caabbinta jirka: resins kala duwan ayaa loo dooran karaa xaaladaha kala duwan.
6．Nolosha adeegga dheer
Naqshadeynta Jrain waxay soo saartaa noocyo kala duwan oo daboollo ah fiberlass-ka deegaanno kaladuwan, cabbirraduna waxay u dhexeeyaan min yar ilaa weyn.
Daboollada waaweyn ee ay sameeyeen qaybaha kaladuwan, waxaan ku soo uruurinaynaa aqoon isweydaarsigayada si aan u hubinno in qayb kasta ay la mid noqon doonto kuwa kale.
Waxaan leenahay waaxda khaaska ah ee caaryada si aan u hubinno in caaryada aan isticmaalno oo dhan ay yihiin kuwo tayo leh, kuwaas oo dammaanad qaadi kara waxyaabaha soo dhammaaday inay buuxiyeen shuruudaha.
Hore: Fanaaniin & Dambas & Demitors
Xiga: Kala caddeynta & dejinta
Daboolka Xabka Fiberglass
Daboolka Frp Manhole
Cover Cover Tuulada FRP
Daboollada Frp ee dabacsan
Mashiinka Dabaysha ee FRP, Caaryada, Fiberlass-ka Farsamaysan, Mashiinka Dabaysha ee GRP, Mashiinka Dabaysha Fiberglass, Dhoolatus gacmeed,